Hoggaan habboon iyo Hoggaamiye hubban – Bashiir M. Xersi
Posted on 12 Dec 2012 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
1. Isku kalsoonaan.
2. Qorshayn qoran.
3. Go’aan qayaxan.
4. Aragti qeexan
5. Barashada xallinta dhibaatooyinka
6. Dhimrin & Dhimirqab
“Maamul aan hoggaan qabin
F:G: Dhammaan meerisyada aan kusoo qaatay qormada, waxay qayb ka yihiin Jiiftadii: “Maan maran!”oo aan anigu curiyey.
Faroole: Puntland anagaa iska leh!
Alla Rajiimyadu isu Raad ekaa!